သမ္မတရှီက တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် တစ်ကမ္ဘာလုံးသို့ COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ၂ ဘီလီယံ ပေးပို့ ထောက်ပံ့သွားမည်ဟု ပြောကြား - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ ပေကျင်းမြို့ မဟာခန်းမ၌ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ် ၅ ရက်က ကျင်းပပြုလုပ်သော ၁၃ ကြိမ်မြောက် အမျိုးသားပြည်သူ့ကွန်ကရက်(NPC) ၏ စတုတ္ထညီလာခံ အဖွင့်အစည်းအဝေးတက်ရောက်ရန် သမ္မတရှီကျင့်ဖိန် ဝင်ရောက်လာစဉ်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံသည် ယခုနှစ်အတွင်း တစ်ကမ္ဘာလုံးသို့ COVID-19 ကာကွယ်ဆေး အရေအတွက် ၂ ဘီလီယံ ပေးပို့ထောက်ပံ့သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း နှင့် COVAX အစီအစဉ်အတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၁၀၀ ပေးအပ်ထည့်ဝင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု နိုင်ငံတကာဖိုရမ်၏ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးသို့ ရေးသားပေးပို့သည့် သဝဏ်လွှာထဲတွင် တရုတ်နိုင်ငံသမ္မတ ရှီကျင့်ဖိန်က ထည့်သွင်း ပြောကြားခဲ့သည်။COVAX (ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးတစ်ကမ္ဘာလုံးရရှိမှုအစီအစဉ်)သို့ ပေးအပ်ထည့်ဝင်မည့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၁၀၀ သည် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများသို့ ကာကွယ်ဆေး ဖြန့်ဖြူးရာတွင် အဓိကအသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့ပြီး တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် COVID-19 ကပ်ရောဂါနှင့်အတူ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများ၏ အခက်အခဲများရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်ရာတွင် အစွမ်းကုန်ကူညီပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံသည် အားလုံးအတွက်ကျန်းမာရေး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအသိုက်အဝန်းတစ်ခုတည်ဆောက်ရန် ကတိကဝတ်ပြုထားပြီး ကမ္ဘာကြီးသို့ ကာကွယ်ဆေးများ ပေးအပ်ထောက်ပံ့လျက်ရှိကြောင်း ၊ အထူးသဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများသို့ ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ထို့ပြင် တရုတ်နိုင်ငံသည် ကာကွယ်ဆေးပူးတွဲထုတ်လုပ်မှု အစီအစဉ်ကိုလည်း တက်ကြွစွာပါဝင်ဆောင်ရွက်နေပြီး ယင်းမှာ ကာကွယ်ဆေးကို ကမ္ဘာ့ပြည်သူ့ကုန်စည်အဖြစ်အသုံးပြုရေး အယူအဆကို ထင်ဟတ်ပေါ်လွင်စေကြောင်း ရှီက ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
“ ဒီဖိုရမ်ဆွေးနွေးပွဲက ကမ္ဘာတစ်လွှားသို့ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး မျှတစွာ ဖြန့်ဖြူးရေး နဲ့ အဆင်ပြေလွယ်ကူစွာရောက်ရှိရေး ၊ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမှာ စည်းလုံးညီညွတ်မှုနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ပိုမို အားကောင်းစေရေး ၊ ကပ်ရောဂါကို စောလျဉ်စွာ အနိုင်ယူနိုင်ရေးအတွက် ပူးပေါင်းပါဝင်မှုအသစ်တစ်ခုအဖြစ် မြှင့်တင်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော် မျှော်လင့်ပါတယ် ” ဟု ရှီက ဆိုသည်။ (Xinhua)
BEIJING, Aug.5(Xinhua) — China will provide2billion COVID-19 vaccine doses to the world throughout this year and offer 100 million U.S. dollars to COVAX, Chinese President Xi Jinping said Thursday inawritten message to the first meeting of the international forum on COVID-19 vaccine cooperation.
“I hope this forum will promote the accessibility and fair distribution of vaccines around the world, strengthen solidarity and cooperation in developing countries, and make new contributions for an early victory against the pandemic,” he said. Enditem
BEIJING, March 5, 2021 (Xinhua) — Xi Jinping arrives for the opening meeting of the fourth session of the 13th National People’s Congress (NPC) at the Great Hall of the People in Beijing, capital of China, March 5, 2021. (Xinhua/Ju Peng)
မက်ဆီ နှင့် ဘာဆီလိုနာအသင်း လမ်းခွဲ ၊ အချစ်ဇာတ်လမ်း အဆုံးသတ်